”Waxay xusayeen calanka!” – 8 gabdhood oo arday u badan oo laga qabtay Laas Caanood oo haatan ku silicsan Berbera (Arrin la is waydiinayo) | Hadalsame Media
Home Wararka ”Waxay xusayeen calanka!” – 8 gabdhood oo arday u badan oo laga...
”Waxay xusayeen calanka!” – 8 gabdhood oo arday u badan oo laga qabtay Laas Caanood oo haatan ku silicsan Berbera (Arrin la is waydiinayo)
(Hargaysa) 05 Luulyo 2021 – Guddiga Xuquuqul Insaanka Somaliland ayaa dhaliilay sida loo dhaqmayo 8 gabdhood oo laga soo xirey magaalada Laas Caanood iyaga iyaga oo xusaya ama maamuusaya Maalinta Calanka Somalia.
Komishanka oo hoos taga isla Maamulka Somaliland ayaa war sidan oo kale u qoran horay uga sameeyey 35 gabdhood oo iyagana laga soo xaabiyey Boorama oo deeto lagu xirey Gebiley, iyadoo aan la ogayn sababta gabdhaha looga fogaynayo degaannadooda, maadaama uu maamulku halkaaba joogo meelo wax lagu xiraana ay ku yaallaan, tiiyoo aysan sharci ahayn in qof loo xiro wuxuu sitey Calanka Somalia.
Previous articleSida loogu kala dheereeyo xallinta MUSHKILADAHA & Sheekooyin dhacay!
Next article”Way soo xoogaysanayaan!” – Israel oo daraasadaynaysa in gebi ahaanba ay qabsato Marinka Gaza (Walaac haysta & dagaallo ay dalal kale ku qaadi karto)